Barlamaanka oo dhegeystay akhrinta labaad Hinse-sharciyeedka lagu dhisayo guddiga madax banaan ee doorashooyinka – Radio Muqdisho
Barlamaanka oo dhegeystay akhrinta labaad Hinse-sharciyeedka lagu dhisayo guddiga madax banaan ee doorashooyinka
Kallfadhiga 5 aad kulankisa 23 aad ee Barlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka Federaalka oomaaliya ee magalada Muqdisho ayaa waxaa shir guddoominaayay guddoomiyaha golaha Barlamaanka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari” ayaa ajandihiisu ahaa akhrinta labaad ee hindise sharciyeedka dhismaha guddiga madax banaan ee doorashinka Qaranka iyo in warbixino laga dhagaysanyey xildhibaano gaaray deeganada ay ka soo jeedaan ee qaar kamid ah gobolada dalka.
Guddoomiyaha guddiga doorshooyinka Barlamaanka Xildhibaan Cabdi Cali Xasan ayaa Baralaanamka u akhriyey muhiimada uu u leeyahay dalka iyo mar xaladii uu soo maray hindhise sharciyeedka dhisamaha guddiga doorashooyinka oo la sameeyay 19 bishii may 2014 kaasi oo ahmiyad gaar ah u leh hergalinta hiigsiga sanadkan 2016-ka in doorashooyin ka dhacaan dalka.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq “Afaraale” oo kamid ahaa mudaniyaasha ka warbixinayay deegaanadii ay kormeereen ayaa sheegay in degmada Tayeglow oo ka tisan gobolka Bakool ay ka jirto xaalado bani’aadminimo oo aad u daran isla markaana dowlada Soomaaliya iyo hay’adaha gargaarka bixiyo in deeq gaarsiyaan dadka ku nool deegaanadaasi.
“waxaa laga codsana hay;adaha gargaarka iyo dowladda Soomaaliya in ay gargaar la gaaraan dadka dhibaataysan inta aysan xaaladooda ka sii darin lagana shaqeeyo sidii wadooyinka loogu furi lahaa degmada si raashiin loo gaarsiiyo dadkaasi” ayuu yiri Xildhibaan Afaraale.
Xildhibaan Axmed Cismaan Ibraahim oo ka mid ah Xildhaanada ka soo jeeda gobolka Gedo oo sheegay in dhawaan safar ku tagay gobolka Gedo ayaa isna xaladaha ka jira gobolkaasi ku tilmaamay mid liidata dowladda Soomaaliyana looga baahanyahay in ay wax ka qabato dhibaatada haysata dadka ku nool gobolka Gedo.
Guddoomiyaha Barlamaanka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari” ayaa kulanka Barlamaanka ee maanta ayaa digniin u diray xubnaha Barlamaanka oo ka tirsan guddiyada Barlamaanka in aysan ka maqanaan Karin kulamada ay guddiyada yeelanayaan.
Hey’adda SIM TRAINING AND CONSULTANCY oo tababar u qabatay 133 qofood (Sawirro)
Agaasimiyaasha Wasaaradaha dowladda oo tababar loo furey